Pendant Yakakwira Aluminium Mbiri
Yakagadziriswa Yakakwira Aluminium Mbiri
Wall / Ceiling / Floor Architecture Aluminium Nhoroondo
Pamusoro Yakagadzika Aluminium Mbiri
LED Strip Lighting Inopa Zvakanakira Galore
Mumakore mashoma apfuura, tekinoroji yeLED yakura pamwero unoshamisa. Mazuva ano mwenje weLED unoshanda uye wakasarudzika-kutarisa kupfuura nakare kose, uye mitengo yemarambi iri kudzikira kota yega yega. Mwenje yemwenje ye LED inzira yakatendeka, isingadhuri yekuwedzera mwenje chero nzvimbo yaunoda iwe, mukati kana kunze. Kutanga kuongorora mabhenefiti eiyi yakasarudzika uye nharaunda ine hushamwari mwenje sosi nhasi.
LED mababu akagadzirirwa kugara kwemakore akareba kupfuura akajairwa mwenje mabumba. Ivo havawanzo kuda kutsiva. Kushandisa mwenje wemwenje ye LED munzvimbo dzakaoma kusvika-dzakadai senge pasi kana kutenderedza masitepisi, mukati memakabati, kana kutenderedza njanji- inobvumira kuvhenekera kusingagumi pasina kunetseka .
Kunyange ma LED ari anodhura zvakanyanya kupfuura mwenje yemwenje, fluorescent, kana mwenje we halogen, mutengo wekutanga-wekutanga unogadziriswa nemarobhu ehupenyu hwakareba uye mashoma simba rekushandisa. Nekuti mwenje yemwenje ye LED inoshandisa mashoma magetsi, kutsiva mwenje wako uripo kunogona kukuratidza kuderedzwa nekukasira mumwedzi wako wemagetsi bhiri. Uyezve, iko kushomeka kwekutsiva kunochengeta mutengo wepasi pasi uye huwandu hwakazara hwemaUSs akakwirira. Zvishoma nezvishoma kugadzirisa, kuderera kwemagetsi zvinodiwa, uye hupenyu hurefu hwekushanda zvese zvinobatsira mukugadzira mwenje ye LED imwe yedzinodhura-mwenje nzira dzenyika dzati dzamboona.
Mutsika yanhasi, kunetsekana kwezvakatipoteredza kwakanyanya kukosha kune vanhu vazhinji kupfuura zvavaimboita kare. Vanhu vazhinji vanoziva yavo yevatengi marara, mashandisiro avo emagetsi, uye nekuwedzera kukuvadza kwemakemikari nezvimwe zvinhu zvine chepfu kune edu marara, nzizi, nemadhamu. LED tambo yekuvhenekera yakasarudzika zvakatipoteredza zvine hushamwari. Izvo zvidiki zvemagetsi zvinodiwa zvemwenje zvinobatsira kuchengetedza simba remagetsi pasi uye kudzikisira mashandisirwo emagetsi mushe. Hupenyu hwavo hwakareba hunobvumidza kushomeka kushoma, vachichengeta zvimwe zvinhu kunze kwenzvimbo dzekurasa. Uye kusiyana neabumburu fluorescent mababu, ayo anogona kuve nengozi kurasa zvisirizvo, kana mwenje dze LED dzikundikana, kuchenesa kwakachengeteka uye hakudi kubata kwakakosha.
Mwenje ye LED inogona kushandiswa mukati kana kunze. Inowanikwa mune yakaoma kana inoshanduka zvikamu, zvakagadzirirwa kuiswa nyore nyore mune chero nzvimbo. Izvo zviri nyore kuisa uye zvinoda zvishoma kune zvisina kugadziriswa nekufamba kwenguva. Inowanikwa mune chero saizi, kureba, kana masitayera iwe aunogona kufungidzira kuti akwanise chero ako emwenje zvido. Kuchinjika kwayo, pamwe nekusimba kwayo kwenguva refu uye nemutengo wayo wakaderera nekufamba kwenguva, inoita kuti ive sarudzo yakasarudzika kune chero munhu anovandudza mwenje wavo kana kuyedza kuenda kune yakasvibira mararamiro.
Runhare: + 90-543-8828188 （WhatsApp）
Ongororo yechiyero chemusika uye kusimudzira ...
Nhamba dzinoratidza kuti nekushandiswa kwesimba rekuchengetedza simba repasi rose uye pfungwa dzekuchengetedza kwezvakatipoteredza uye nerutsigiro rwemitemo yemaindasitiri munyika dzakasiyana siyana, musika wepasi rose wemwenje we LED wakachengetedza ...
Kutaura nezve mwenje une hutano uye girini ...
Iyo yakazara chirevo chekuvhenekesa kwegirini kunosanganisira zviratidzo zvina zvekunyanya kushanda & kuchengetedza simba, kuchengetedza kwezvakatipoteredza, kuchengetedza uye kunyaradza, izvo zvakakosha. Kushanda kwepamusoro-soro uye kuchengetedza simba zvinoreva...
Chengetedzo yekuiswa kwe LED strip ...
6. Chenjerera kumusoro kwakachena uye kwakarongeka paunenge uchiisa Usati waisa tambo yechiedza, ndapota chengetedza nzvimbo yekuisa yakachena uye isina guruva kana tsvina, kuitira kuti irege kukanganisa kunamatira kwechiedza chechiedza ...
1. Kurambidzwa kwebasa mhenyu Chiedza chemwenje che LED ibheji remwenje re LED rakasungirirwa pabhodhi redunhu rinochinjika rine tekinoroji yakakosha. Mushure mekunge chigadzirwa chaiswa, chinopihwa simba uye kuvhenekerwa, uye icho ...
Maitiro ekuchengetedza magetsi uye nzira dze ...
"Rambi" harina basa rekuvhenekera chete, asiwo rine basa rekushongedza nekushongedza. Zvisinei, kana pane simba risina kukwana, kushanda kwemwenje kunofanira kuvandudzwa uye chiedza ...
Chiedza chedenga chete hachina kukwana kuti...
Chikamu chimwe muzvitatu cheupenyu hwemunhu chakarara, uye tinofanira kugara muimba yekurara kwenguva refu kupfuura iyi. Kune nzvimbo yakakosha zvakadaro, isu tinofanirwa kuishongedza zvinodziya sezvinobvira uye kuita iyo yakanakisa nzvimbo yekuzorora uye e ...
Led Chiedza Rudzi Tembiricha Rudzi
Tembiricha yeruvara rwemwenje sosi Vanhu vanoshandisa tembiricha yakakwana yeradiyeta yakaenzana kana padyo netembiricha yeruvara rwemwenje sosi kutsanangura tafura yeruvara rwemwenje sosi (iyo ...
Usatenge LED street light wit...
LED Street Light inoda kuvhurwa zuva rega rega uye kwenguva yakareba. Kana zvinodiwa zvemhando yepamusoro zvisina kukwirira, kwete vanhu chete vasingagutsikane, asi mwenje wemumugwagwa maneja- nt uye kugadzirisa zvakare ibasa rakaoma....
Maitiro ekutonga mhando ye LED Ultra-thi ...
Core tip: Kune akawanda mabhenji e LED Ultra-matete epaneru mwenje mumusika. Tinoziva sei kuti ndeipi iri yemhando yepamusoro? LED Ultra-yakatetepa pani mwenje inogona kunzi ndiyo yakanakisa mumiriri weLed simba-yekuchengetedza la ...
Ndezvipi zvinomiririra ...
Zvichienzaniswa nemamwe marudzi emarambi, zvigadzirwa zvemwenje zvekutengesa zvine maitiro akasiyana uye mutsauko. Magetsi emagetsi ekutengesa anonyanya kushandiswa munzvimbo dzekutengesa. Zvichienzaniswa nemamwe marudzi emarambi, t ​​...
Kutanga kwe LED kupisa kupisa
Mukuvakwa kwepa-saiti, hupenyu hwebasa rerambi reLED uye mhedzisiro yekushandisa kwayo zvakabatana zvakanyanya nekupisa kwayo kupisa. Kana kupisa kwekupisa kweiyo mwenje we LED isina kunaka, zvinokanganisa zvakananga ...
Philips 3030 akatungamirira Flood Light, akatungamirira Tri-Zvinoratidza Light yechigarire , Akatungamirira Cob Flood Light, Akatungamirira Solar Rechargeable Flood Light, Akatungamirira Floodlight 30w, Ceiling Led Panel Light ,